မမသီရိ: February 2010
အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ လူးလာခေါက်တုန့်
အလွမ်း နွံအိုင်ထဲ ..မမော မပမ်း ကူးခပ်..
အဲဒါ... သူမ.. ပေါ့..
ချစ်မိ လို့ ချစ်သွားသတဲ့
သူမ ပြောခဲ့.. သူ့ ကိုချစ်တဲ့ အကြောင်းတွေ...
သူ့ကို ချစ်ခြင်းတွနဲ့ ဖုံးအုပ်..
သူမ ချစ်တာ.. သူ့ အမည် စာလုံ့းပေါင်းလေးတွေက အစပါ.. တဲ့..
တနေ့တခါ မမြင်ရ .. နွမ်းလျ လို့ပမ်း
ကြာလေ ချစ်လေ.. ချစ်လေ.. လွမ်းလေ..
လွမ်းလေ ချစ်လေ....ချစ်နေမိတာ သူ့ ကိုပါ တဲ့....
တရာသီဖြင့်ရင်လဲ တရာသီ မဟုတ်..
အချစ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ အရာများ
လိုလိုချင်ချင် တပ်မက်ဖူးသော သူ့ နှလုံးသား..
ဓား ပါးပါး တွေ နဲ့
တလွှာချင်း လွှာခံရပြီး တဲ့ နောက်မတော့...
အနာဂတ်ကို လျှောက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း..
အတိတ်ပန်းခင်းထဲမှာ ပဲ ညှို့ချက်မိ..
ပျားဆိပ်ဒဏ် အဖန်ဖန် သင့်ခံ ထိနေသော
လေထဲစီးမျောနေတဲ့ သီးချင်းသံ သဲ့သဲ့ နောက်
တကောက်ကောက် လိုက်ရင်း အမောသင့်နေရရှာသော...
ဟိုတစ ဒီတစ.. ပြန့်ကျဲ လွင့်စင်ကျသွားသော
မှန်ကွဲ အစတွေ တယုတယ ပြန်ကောက်
ကောင်းလာလေနိုး ကြိုးစားဆက်ရင်း.. မှန်ကွဲစ ရှခံထိနေသော...
ဒြပ် အကောင်အထည် ရှိနေပါရက်..
ပြန် ပြန် စမ်း ကြည့်တဲ့ အခိုက်
တိုက်မိ စရာ အရိပ်တောင် မရှိတော့တဲ့ နောက်
ပျောက် ပျောက် သွား လုပြီ ဖြစ်နေ သော.....
ကောင်းကင်ပြာပြာ ကိုမော့ ကြည့်ရင်း
သမုဒ္ဒရာ အမှတ်နဲ့ တိမ်တွေအကြား..
အိပ်မက်ကို ကျောပိုးလို့ လက်ပစ်ကူး သွားနေသော.....
သူမ ... အသက်တမျှ.. ချစ်ရသော... သူ......
သူ နဲ့ သူမ
သွေးတစက်စက် ကျနေတဲ့ သူ့ ဒဏ်ရာတွေ အတွက်
သူမ နှလုံးသားဟာ မွမွ ကျေခဲ့....
ဟက်တက် ကွဲ ကာ ရိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ သူ့ ဒဏ်ရာတွေအတွက်
သူမ... အသက်နဲ့ လဲ လို့ ကုပေးခဲ့ချင်သတဲ့..
သူမရဲ့ သွေးတွေ ဆေး အဖြစ် ဖန်ဆင်း..
သူ့ အနာ မယင်းအောင် ကာကွယ် ခဲ့ ချင် သတဲ့...
သူ စိတ်ချမ်းသာ ဖို့..
သူ.. သာ.. ပြန်လည် ရှင်သန်လာမယ် ဆို..
အချစ်တွေ နဲ့ သူမ.. ပေးဆပ်လို့ရသမျှ ပေးဆပ်ချင်သေး သတဲ့..
အိပ်မက်ထဲတွေ တောင် ယောင်ပြီးတော့ချစ်..
အဲဒီ အဖြစ်တွေ အကြောင်း.. သူ့ ကို ပြန်ပြောင်းပြောတဲ့အခါ
အိပ်မက်တွေ ခဏခဏ မမက်ပါနဲ့ လုံမ ရယ်. လို့.
သူ က ပြော အုံးမှာ ဖြစ်ပေမဲ့...
အလွမ်းဒဏ်သင့် ကဗျာတွေ.. အပုဒ်ရေ များလာပြီ ဆိုမှဖြင့်
အဲဒီ အလွမ်း ကဗျာ တွေ ခဏခဏ မရေး ပါနဲ့ လုံမ ရယ်. လို့
သူက ပြောအုံးမှာ ဖြစ်ပေမဲ့...
သူ သွား ရာ လမ်းတလျှောက်..
သူ့ ကျကျန်နေခဲ့တဲ့ အလွမ်း အစက် အပျောက် တွေ
တစ စီ တစက်စီ နောက်ကကောက်...
သံ ယောဇဉ် ကျည်တောက်ထဲ စု..
သူ့ ဒဏ်ရာတွေ ပျောက်တဲ့ အထိ .. နောက်ဆုံး ထွက်သက် ရှိချင် ရှိစေ..
သူမ ... စောင့် နေမှာ....တဲ့...
သူ ငိုဖူး တဲ့ သစ်ပင်အောက်..
ကျကျန်နေတဲ့ သူ့ မျက်ရည်တွေ
တစစီ တပွင့်စီ နောက်ကကောက်..
အကြင်နာ ကျည်တောက်လေးထဲ ထည့်
သူ့ မျက်ဝန်းတွေ ပြန်လည်တောက်ပမဲ့နေ့
အသက် ရှိသရွေ့ သူမ စောင့်နေမှာ....တဲံ့....
ဘလက်ခ် ဟိုးလ်.. တွင်းနက်ထဲ ပြုတ်ကျ...
ပျောက်ဆုံး သွားရတဲ့ သူ့ အပြုံးတွေ...
အသက်ပြန်ဝင်လေနိုး.. မျှော်ကိုး တွေးစိတ်တွေ နဲ့..
ရင်ဖိုစွာ မန်းမှုတ်.. လက်အုပ်လေး ချီ ဆုတောင်းရင်း...
ဘ၀ ကူး ခြင်းဆိုတာ မရှိသရွေ့.... သူမ.. စောင့်နေမှာ တဲ့.....
သူမ... ဟာ.... အချစ်ဆိုတာ.... သူ နဲ့ တွေ့ မှ .. သိတာပါ ... တဲ့....
သူမ... ဟာ.... အချစ်ဆိုတာ.... သူ နဲ့ တွေ့ မှ .. သိတာပါ ... တဲ့.....။
Posted by မမသီရိ at 2/25/2010 09:03:00 AM
မွေးတာကမြို့ပေါ်မှာ ကြီးတော့ ဖေဖေတာဝန်ကျတဲ့ မိခင်ဖက်ကအဖိုးတွေအဖွားတွေ ရှိတဲ့နယ်မှာ၊ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မနီးစပ်တဲ့အပြင် ခရစ်နှစ်သစ်ကူးကို တကူးတက အလေးမထားတဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူမို့ ဒီဇင်ဘာ နှစ်ကူးညတွေကို ရင်ခုန်ရကောင်းမှန်း မသိခဲ့တဲ့ သူပါ။
၂၀၁၀ အကြို နှစ်ကူးည ရဲ့ ည ဦး ၁၁ နာရီ ခွဲလောက်ထိ သဲအညိုနုရောင်တွေ လွှမ်းတဲံ့ ကမ်းခြေ ဟိုတယ် တခု ရဲ့ အခန်းကျယ် တခု ထဲမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကို အဖော်ပြုရင်း ကွန်ပျူတာတလုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ရတဲ့ ကုသိုလ်ကံ ရုပ်ဆိုးဆိုးကြောင့် အလုပ်ခပ်များများ မိန်းမ တယောက်ဟာ ကျမ ပဲပေါ့။
ဟိုတယ်ရဲ့ ကပွဲ ခန်းမဆီက ရီမောသံတွေ သီချင်းဆိုသံ၊ ကခုန်မြူးတူးသံတွေက အခန်းထဲဆီကို တချက် တချက် လွင့်ပျံ တက်လာနေပေမဲံ့၊ ၂၀၁၀ မကူးခင် အပြီးသပ်ရမဲ့အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးနေရတာမို့ အဖွဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမက ခေါင်းဆောင်ပြီး ခေါင်းမထောင်ရဲ၊ ကိုယ်သာ အရင်ဖင်ကြွ လိုက်လို့ကတော့ အလုပ်ကပြီးဖွယ်ရာ မမြင်တာမို့ တနေကုန်ပင်ပမ်းထားတာတောင် ကြိတ်မှိတ် ဆက်လုပ်နေခဲ့ရတာမျိုး.. ။
၁၁ နာရီ ခွဲမတော့ လက်ပ်တော့ကို ပိတ်ချ လိုက်ပြီး အခန်းဖော်ညီမငယ် နဲ့ အပြင် ထွက်ခဲ့ကြတယ်.. ကပွဲ ခန်းမနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ပျော်နေကြသူတွေချည်း..။ ကိုယ်နဲ့ မျက်နှာသိတွေလဲ မရှိတာမို့ ၀င် ပျော်ကြဖို့က ခပ်ကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေမှာမို့ နှစ်ယောက်သား ကမ်းခြေဖက်ကို ခြေဦးလှည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြရင်း.. မီးမှိန်မှိန်လင်းနေတဲ့ ဟိုတယ်ရှေ့ဖက်ဆီ တိုးဝင်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်.. ။
"နှစ်သစ်ကူးချိန် ကိုခုလိုစောင့်ကြည့်ဖြစ်တာ မမ ဘ၀ မှာ ဒါဟာ တတိယအကြိမ်မြောက်ပဲ ညီမ ရဲ့.."
အညိုနုနု သဲမွမွ ကမ်းခြေပေါ်မှာ ထိုင်ချလိုက်ရင်း ပြောလိုက်တဲ့ သူ့စကားသံကြောင့် ဘေးက အခန်းဖော် ညီမငယ်က သူမ မျက်နှာကို တအံ့ တသြ လှမ်းကြည့်လာပါတယ်..။ ဟုတ်ရဲ့လား လို့ မယုံချင်စွာ စူးစမ်းတဲ့သူမလေးရဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို လပြည့်ည လရောင်အောက်မှာ ကျမ တွေ့ဖြစ်အောင်တွေ့လိုက်မိတယ်..
"၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ကူးတဲ့အချိန်တုန်းက ဘ၀ရဲ့ ပထမ ဦးဆုံး နှစ်ကူးည ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့..အဲဒီတုန်းက မမ တာဝန်ကျခဲ့ မြို့လေးရဲ့ Inter Agency Happy New Year Party ကို ခုလောလောဆယ် စင်္ကာပူကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေ မောင်ငယ်လေး တယောက်နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ဦးစီးပြီး မမ တို့တွေက ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ရတယ်.. လိုတဲ့ ရန်ပုံငွေကိုတော့ အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံတကာ ၀န်ထမ်းတွေက အများစု ကျခံပေးကြတယ်လေ.. ပျော်စရာတော့ အကောင်းသား ကွဲ့.. အစားအသောက်တွေ.. အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ရဲ့ လုပ်ငန်းပြကွက်တွေ၊ ရီစရာဖက်ရှင်ရှိုး၊ လှယဉ်ကျေးမောင် ပြိုင်ပွဲ၊ စတေ့ရှိုး၊ မီနီေ၈ါ့ဖ်.. အို.. စုံနေတာပဲ.. အဲဒီတုန်းက အဲဒီမြို့သေးသေးလေးမှာ အဖွဲ့ ပေါင်း ၁၀ ကျော် ၂၀ နီးပါး ရှိနေတာဆိုတော့ ၀န်ထမ်းတွေလဲ အများကြီးပေါ့..... ၂၁ ရာစုရဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့ နှစ်ဟောင်းရဲ့ နောက်ဆုံး စက္ကန့်ပိုင်းလေးကို တော့ ဖယောင်းတိုင်လေးတွေ ကိုယ်စီ ကိုင်ရင်း နှင်းမှုန်ဖွဲဖွဲအောက်မှာ လူတွေအများကြီးနဲ့ ထောင်စုနှစ်သစ်ကို ကြိုခဲ့တာလေ.."
"ဒုတိယ အကြိမ် နှစ်သစ်ကူးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က၊ ရုံးက ညွှန်ကြားချက်နဲ့ မမ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ခဲ့ရတာ..။ နှစ်သစ်ကူး ကို Peace Mobilization Objective နဲ့ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတွေအကြား Inter Ethnic Activity ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ရတာ.လေ.။ နှစ်သစ်ကို အကြောင်းပြုပြီး လူမျိုးစုတွေ အကြားအချင်းချင်းနားလည်မှုတည်ဆောက်ဖို့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတရားတွေ အခြေခိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ရတာ.ပေါ့..။ Happy New Year လို့ ကိုယ်တိုင် မိုက် ကိုင် ဦးဆောင် အော်ခဲ့တာပေမဲံ့ တာဝန်တွေနဲ့ ပျော်စရာရယ် လို့ ထူးထူးထွေထွေ မခံစားခဲံ့ရဘူး.. သူများတွေပျော်တာကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရတာ တခုပါပဲ.. "
"ခု ဒီတကြိမ်ကတော့ . မမ ဘ၀ ရဲ့ တတိယ အကြိမ်.. မမျှော်လင့်ပဲ ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့ပြီ"..
ကျမရဲ့ စကား ရှည်ကြီးကို တမေ့တမော လှမ်း နားထောင်ပေးနေတဲ့ ညီမငယ် ကို ကျမ အသာအယာ ငဲ့စောင်းကြည့်မိတယ်.. ကျမရဲ့ ဘ၀ အတွေ့ အကြုံတွေကို အလျင်းသင့်သလို.. ပြောပြနေကျမို့ ဒီတခါလဲ ပဲ သူမလေးက စိတ်ဝင်တစားနားထောင်ပေးနေတာကို တွေ့ရတာမို့ ကျမ နဲနဲတော့ ကျေနပ်သွားရပါတယ်... ဒီညီမလေးနဲ့ ကျမ အလုပ်တွဲလုပ်ဖြစ်တာ တနှစ်နီးပါး လောက်ပဲ ရှိသေးပေမဲ့ လူတဖက်သားအပေါ် အတော်လေး နားလည်ပေးတတ်သူလေး မှန်း ကျမသိခဲ့ရတာ တွေ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲဆိုပါတော့..။ ကျမရဲ့ လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေကို ဒိုင်ခံ မျှဝေခံစားပေးနေသူလေးပါပဲ။ ကျမ ကဗျာတွေ ရေးတယ်ဆိုတာ အပြင်လောကမှာ သိတဲ့သူ ၃ ယောက်လောက်ပဲ ရှိတာထဲ သူမလေး က တယောက်ပေါ့..။ အကောင်အထည် ဖမ်းယူ ဆုပ်ကိုင်မပြနိုင်တဲံ့ ကျမရဲ့ လွမ်းဆွေးခြင်းတွေ၊ ကျမရဲ့တမ်းတခြင်းတွေ ကို နားလည်ပေးသလိုပဲ ဘာရယ်လို့ မဝေခွဲနိုင်သော သောကတွေ နဲ့ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်ဖူးတဲံ့ အခိုက်အတန့်တွေမှာလဲ သူမလေးက အားပေးဖော် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျမနှလုံးသားထဲက အရာတော်တော်များများ ကို မျက်မှန်အောက်က မျက်ဝန်းတချက် မော့ကြည့်ရုံလေးနဲ့ မှန်းဆပြီး နားလည်ပေးတတ်သူလေးနဲ့ ကျမ ရဲ့ တတိယမြောက်နှစ်ကူးည ကို အတူဖြတ်သန်းရမှာ ကျမ စိတ်မကောင်း မဖြစ်မိပါဘူး..။
ကောင်းကင်ပေါ်မှာ ပြည်ပြည့်၀၀ ကြီးသာနေတဲ့ လမင်းဝါ၀ါ ကို မော့ကြည့်ရင်း တစုံတရာ ကို သည်းသည်းနင့်နင့် တမ်းတ မိတာကလွဲ လို့ ပေါ့လေ...
"လမင်းကြီးကို မော့ကြည့်ရင်း.. လွမ်းချင်နေတာမို့လား.. မမ..သဲပေါ်မှာ ကျောခင်း လှဲချ လိုက်လေ.. ကဲ စဉ်းစားမနေနဲ့တော့ .. ညီမတော့ လှဲ ပြီးနော်.. '..
ပြောလဲပြော လှဲ ချလိုက်တဲ့ သူမလေး ကိုစောင်းကြည့် ရင်း ထပ် စဉ်းစား မနေတော့ပဲ (ခြုံလာတဲံ ပုဝါ ကိုတော့ အောက်က ခင်း ဖြစ်အောင် ခင်းလိုက်သေးတယ်).. လှဲချ မိပါတော့တယ်..
'' ကမ္ဘာမြေကြီးအပေါ် ကျောခင်းတာ ဒါ ပထမ ဆုံးပဲ ညီမ ရ.. " ဆိုတဲ့ ကျမ စကား ကိုတော့ သူမ က နောက်ထပ် အံ့ သြဟန် မပြတော့.. ကျမ နဲ့ နေလာတဲ့ တလျှောက်လုံး ကျမ ဆီ က အံ့သြ ထူး ဆန်းဖွယ်ရာတွေ မကြာခဏမြင်ခွင့် သိခွင့်၊ ကြားနေခဲ့ရပြီး ပြီး ကိုး..။
ဟိုတယ်ရဲ့ ကပွဲခန်းမဆောင်နေရာဆီက မီးရှူး မီးပန်းတွေ လွှတ်တင်သံတွေ ကြားလာရပြီ..
ကမ်းခြေ နေရာ တချို့မှာတော့ လူငယ်လေးတွေ ဟိုစုစု ဒီစုစု နဲ့ ပျော်စရာနှစ်သစ် လို့ အော်ကြရဖို့ကို အသင့်ပြင်နေကြပြီ..
ခြေရင်းနားက ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲ မတော့ လှိုင်း အိအိလေးတွေ က အသံတိတ် ကမ်းနား ကို ပြေးလိုက် ခွာလိုက်....
ကောင်းကင်ပေါ် နှင်းမှုန်တွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ထူထူ လေး ဆင်းသက် လို့. မျက်နှာပေါ် လာနမ်း နေ..
အေးစိမ့်လာတဲ့ အချမ်းနဲ့ နင့်နင့်သီးသီး လွမ်းဆွတ်လာတဲ့ သူ့မျက်နှာ ကို မြင်ယောင်လာမိတဲ့ အခိုက်မတော့ .. နှုတ်ဖျားပေါ် က ကဗျာဟောင်းလေး တပုဒ် ရုတ်တရက် ခုန်ချ လာတော့တယ်......
လုံအောင် မနွေး နိုင်သမို့.
၂၀၀၉ ရဲ့ နောက်ဆုံး ညနေခင်း .. သူမ ရှိနေခဲ့တဲ့ ကမ်းခြေ မှာ.......
၂၀၁၀ ရဲ့ ပထမ ဆုံး နံနက် ခင်းဟာလဲပဲ ခါတိုင်းနဲ့ မခြားနားစွာ.. အလွမ်းတွေ နဲ့ ထူထပ်ဆဲ.......။
မမသီရိ ( ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ)
ဘလော့နဲ့ဝေး.. ခင်ရာမင်ရာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ..။ အလုပ်တွေက တခုပြီး တခု ပိလာနေတာက တကြောင်း၊ နဲနဲ အားမယ် လို့ ကြံလိုက်တဲ့ အခိုက်မတော့ ကွန်နက်ရှင် က အတော်ကြာကြာ မကောင်း၊ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းပြန်တော့ ကွန်ပျူတာက ပြသနာ ၀င်နဲ့.... မိတ်ဆွေ တွေ ကို လွမ်းရုံမှ အပ မတတ်သာ ခဲ့....
စီဘောက်မှာ လာပြီး နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ မေးလ်နဲ့ လှမ်းပြီး စိတ်ပူပေးသူတွေ အားလုံး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်.. ရေးထားတဲ့ ကဗျာ အကြမ်းတွေ အများကြီး ရှိနေတာမို့ အားတာ နဲ့ ဆက်တိုက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်...
ခု တင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်လေး က လဲ ရေးထား ကြာပြီ .. နှစ်ကူးပြီး ကတည်းက၊ ဒါလေးတောင် အဆုံး မသတ်နိုင်အောင် များခဲ့တဲ့ အလုပ် ကိုတော့ ရမယ် မဖွဲ့တော့ပါဘူး.. လေ...း)...။
Posted by မမသီရိ at 2/19/2010 08:05:00 PM
Labels: ၀တ္ထုတို, ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း